Nandrehitra Fahatezerana Tao Ozbekistan ny Fitombenan’i Robbie Williams · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2018 16:50 GMT
Robbie Williams, Nalain'i MariaAndronic tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Fiaraha-miasa amin'ny EurasiaNet.org ity lahatsoratra ity. Nahazoana alàlana ny famoahana azy eto indray.
Nitarika hatezerana goavana tamin'ny aterineto ao Ozbekistan ny nanondroan'ilay mpihira pop britanika Ronnie Williams fitombenany nandritra ny fampisehoana nataony tao an-drenivohitra, Tachkent.
Misy ireo izay tsy tohina tamin'ny fihetsik'ity mpanakanto ity, nandritra izay dia teo ihany koa ireo izay nalahelo noho ny fiakaran'ny vidin'ny tapakila amin'ny fampisehoana tamin'ny 15 Desambra.
Zava-tsy fahita ho an'i Ozbekistan ny fampisehoan'i William, izay nokarakarain'i Alisher Usmanov ilay Ozbeka-Rosianina miliaridera sy mpiara-tompon'ny klioban'ny baolina kitra londoniana. Mahalana ireo artista malaza tandrefana no tonga any Ozbekistan, ary nanao izany ireo mety hisy fiantraikany amin'ny lazany izay nandeha tany taloha. Toa mikendry hampisehoana ny fisokafan'ny firenena hatramin'ny nahafatesan'i Islam Karimov, Filoha tsirefesimandidy, tamin'ny herintaona ilay fampisehoana.
Natombok'i Williams tamin'ny fiakarana an-tsehatra niaraka tamin'ny khalat, karazana raoby Ozbeka, ny fampisehoana sady nanolotra ny tenany tamin'ny alalan'ilay fomba tsy manaja izy.
“Io ny tarika-ko”, ho izay sady nanondro tany aorianan'ny sehatra izy.
“[Ary] ito kosa ny fitombenako”, hoy izy nanampy sady niodina sy nampiakatra ny akanjony izy mba ampiseho ny atin'akanjony “ Izao alina izao, ahy ny fitombenanao “ hoy izy namarana ny teniny, izay nitarika hatezerana mifangaro hehy.
Ankatoavina — mba tsy hitenenana hoe ampirisihana — ny fihetsika mampiseho fitombenana any amin'ny faritany anglisy fihavian'i Williams izay manao izany amin'ny fisehosehoana hogartiniana, nefa diso lalana ny fanaovana izany ao Ozbekistan.
Nanao fiantsoana avy hatrany ireo mpisera media sosialy taorian'ny fampisehoana mba hanao fanentanana hanesorana hatramin'ny fakany ny fitarihan'ny vahiny izay mitondra toetsaina hafahafa.
“Tokony sivanintsika ny kolotsaina tandrefana miditra eto amitsika, raha azo antsoina akory hoe kolotsaina aza izany!” hoy ny trerotreron'i Saiyora Hodjayeva.
Lasa lavitra kokoa i Mukimjon Halmatov ary nanolo-kevitra fa mety mitarika an'i Ozbekistan ho any amin'ny onjam-pandringanana ilay fampisehoana izay nampifandraisiny tamin'ny famelezan'ny aretina sy ny fampihorohoroana.
“Ny olona sasany nitondra aretin-kisoa, ny sasany kosa nitondra SIDA sy aretina [ISIS]. Tadavin'izy ireo hamindrana ny aretin'ny demaokrasia ankehitriny i Ozbekistan. Izany indrindra no nitondrana an'i Robbie aty”, nosoratan'ny Halmatov, tsy nahitana endrika esoeso velively.
Na dia mety ho tafahoatra aza ireo hevitra ireo, dia mazava fa tsy nolanjalanjain'i Williams tsara ny fihetsiny ary tsy nanao izay tokony natao akory aza izy.
Fiaraha-monina mitàna fomban-drazana i Ozbekistan ary tsindraindray ny manampahefana te-hitarika mankany amin'izany fomba fijery izany hanoherana ireo heverina ho karazan'aretin'ny zavatra avy any ivelany nampidirina toy ny hip-hop. Ary nisy tamin'ireo mpanakanto malaza eo an-toerana no niharan'ny fanaraha-maso ara-maoraly noho ny fanatontosana zavatra heverina fa feno fahavetavetana loatra.
Nolazain'i Kamariddin Shaikhov, izay tonia ao amin'ny tranonkalam-baovao malaza amin'ny fiteny ozbeka Qalampir.uz; fa feno hafatra milaza fahatafintohinana tamin'ny tohin'ny fampisehoana nataon'i William ny sata navoakany.
“Toa hafahafa ny niakaran'ilay mpihira teo an-tsehatra anaty raoby fa tsy nanao pataloha” hoy i Shaikhov. Nampiseho tsy fanajana ny kolotsainantsika izy tamin'ny nanasondrotany ny akanjony sy ny nampisehoany ny fitombenanany tamin'ny olona nanatrika teo. Fa inona izany, famantarana ny fanabeazana azony ve? Izany ve no antsoinareo hoe manaja ny vahoaka Ozbeka? “
Na dia izany aza, sarotra ho an'ny Ozbeka amin'ny ankapobeny ny hahatakatra ny vidim-pidirana hijerena fampisehoana, namidy tamin'ny vidiny mampivandravandra $190 hatramin'ny $225 ny tapakila iray. Kanefa manodidina ny $125 ny karaman'ny Ozbeka iray isam-bolana amin'ny fomba ofisialy.
Na izany ary, dia hipoka tanteraka ny efitrano fampisehoana.
Mbola niaro azy ihany ireo mpankafy an'i William na dia teo aza ireo trerona noho ny fampisehoana fitombenana. Ny sandan'ny vidim-pidirana no nahasorena azy ireo.
I Zarina Ubaidullayeva, mponina ao Tashkent sady mpankafy ilay mpanakanto britanika, nilaza fa nitarina ny hatezerana.
“Sangisangy fotsiny iny. Tsy toy ny hoe nihazakazaka niboridana teny ambony sehatra izy. Tsy misy antony tokony hitsarana azy mafy toy izany” hoy i Ubaidullayeva tao amin'ny EurasiaNet.org. “Saingy nisy ihany koa ny fahalafosan'ny tapakila, izay midika fa tsy manana fahafahana hanatrika ilay fampisehoana aho. Satria nanohana ara-bola izany i Usmanov, dia tokony natao maimaim-poana ny fampisehoana na farafaharatsiny natao vidiny mirary.”